ရေနံယိုဖိတ်မှုကြောင့် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာ - Xinhua News Agency
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ Orange ကောင်တီ၊ Huntington ကမ်းခြေ၌ ဆီများဖြင့်ညစ်နွမ်းနေမှုအား ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၃ ရက်တွင်တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
လော့အိန်ဂျလိစ်၊ အောက်တိုဘာ ၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Gavin Newsom က Huntington ကမ်းခြေ၌ ကြီးမားသောရေနံယိုဖိတ်မှုအား အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှု ပံ့ပိုးရန် ကယ်လီဖိုးနီယားတောင်ပိုင်း Orange ကောင်တီ၌ အောက်တိုဘာ ၄ ရက်ညတွင် အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာခဲ့သည်။
“ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ပြည်နယ်အနေနဲ့ရနိုင်သမျှ အရင်းအမြစ်များအားလုံးကိုစုစည်းပြီး ကြန့်ကြာတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်တဲ့ကြိုးနီစနစ်ကို ဖြတ်တောက်ဖို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်’’ ဟု Newsom က ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပြောကြားထားသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ လောင်စာစွမ်းအင်မှ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု လျှော့ချရေး နှင့် ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုတိုက်ဖျက်ရေးတွင် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်သည် ထိပ်တန်းမှဦးဆောင်လျက်ရှိရာ ယခုမတော်မတဆမှုသည် မိမိတို့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း နှင့်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လောင်စာဆီများကြောင့် တန်ဖိုးကြီးကြီးမားမားပေးဆပ်ရခြင်းကို သတိပြုမိစေကြောင်း ၎င်းကမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ကြေညာချက်တွင် ထောင်နှင့်ချီသည့် ရေနံစိမ်းစည်များသည် ဖယ်ဒရယ်ရေပိုင်နက်ရှိ Orange ကောင်တီ Huntington ကမ်းခြေမှ ၅ မိုင်အကွာ (၈ ကီလိုမီတာခန့်) ရှိ ပိုက်လိုင်းတစ်ခုမှ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲသို့ ယိုဖိတ်ခဲ့ကြောင်းဆိုသည်။
အမေရိကန်ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့သည် ရေပေါ်မှ ဆီများကို ခပ်ထုတ်ရန် ၊ ဘေးသို့ဆက်၍မပြန့်အောင် ဘောင်ခတ်ရန်နှင့် ရှင်းလင်းဖယ်ရှားရန်ကြိုးပမ်းသည့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုကို ကနဦးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ရေနံယိုစိမ့်မှုသည် ၎င်းဒေသရှိ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရေနေသတ္တဝါများအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိကာ ဆက်လက်ခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ပြည်နယ်အေဂျင်စီများအား သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်မှုကို ချက်ချင်း အလျင်အမြန်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ရေနံယိုဖိတ်မှုကြောင့် သက်ရောက်မှုများ လျော့ပါးရေးလုပ်ဆောင်ရန် Newsom က တိုက်ရိုက် ညွှန်ကြားထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ရေနံယိုဖိတ်မှုကြောင့် သမုဒ္ဒရာထဲသို့ ရေနံစိမ်း ၁၄၄,၀၀၀ ဂါလံ (၅၄၅,၀၉၉ လီတာခန့်) ယိုဖိတ်ခဲ့နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု အောက်တိုဘာ ၂ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သော ပထမဆုံးအစီရင်ခံစာတွင် တာဝန်ရှိသူများက ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
LOS ANGELES, Oct.4(Xinhua) — California Governor Gavin Newsom on Monday night proclaimedastate of emergency in Southern California’s Orange County to support the emergency response to the massive oil spill off the coast of Huntington Beach.
“The state is moving to cut red tape and mobilize all available resources to protect public health and the environment,” said Newsom inastatement.
“As California continues to lead the nation in phasing out fossil fuels and combating the climate crisis, this incident serves asareminder of the enormous cost fossil fuels have on our communities and the environment,” he noted.
According to the governor’s proclamation, thousands of barrels of crude oil were released fromapipeline into the Pacific Ocean approximately five miles (about 8 km) off the coast of Huntington Beach in Orange County in federal waters.
The United States Coast Guard initiated an emergency response effort to locate, confine and attempt to remove the oil from the water. The oil release has impacted and continues to threaten the environment and marine life in the area.
Newsom noted that he has directed state agencies to undertake an immediate and aggressive action to clean up and mitigate the effects of the oil spill.
Officials said the spill, first reported on Saturday morning, could have poured as much as 144,000 gallons (around 545,099 liters) of oil into the ocean. Enditem
အာဖဂန် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့က အိုင်အက်စ်မိတ်ဖက်စစ်သွေးကြွ ၁၁ ဦး ဖမ်းဆီးရမိ